An introduction to the history of the trade between gotland and great zimbabwe Coursework Help wphomeworkuqzr.nextamericanpresident.us
The time span in which trade has developed and came to its highest level in both places was about the same in great zimbabwe it was between the 10th and the 16th centuries in gotland it started in the vikings age end (9th century) and ended in the 16th century [tags: geography], 796 words (23 pages), strong essays.
The kingdom of great zimbabwe disappeared in the 1600s and as with thulamela and mapungubwe there are different theories about the reasons for this event some researchers think the environment changed and that the gold trade in the region declined, but it could also be that gold resources, water. Great zimbabwe, the namesake of the african country, is the site of the largest settlement ruins in sub-saharan africa, second only on the continent to of kilwa kisiwani represent a slice through east african history, from the high point of the swahili civilization, through decline under portuguese control,.
With an economy based on cattle husbandry, crop cultivation, and the trade of gold on the coast of the indian ocean, great zimbabwe was the heart of a thriving trading empire from the 11th to the 15th centuries the word zimbabwe, the country's namesake, is a shona (bantu) word meaning “stone houses” ruins of the. Great zimbabwe for centuries, this ancient shona city stood at the hub of a vast trade network the site has also been at the center of a bitter debate its unique architecture and sculpture--particularly the enigmatic birds carved from soapstone--bespeak a rich history, one that archaeologists continue to.
Download an introduction to the history of the trade between gotland and great zimbabwe